Maxbuus sharciga ku bartay xabsiga oo caddeeyay inuusan dambi lahayn | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxbuus sharciga ku bartay xabsiga oo caddeeyay inuusan dambi lahayn
Lahaanshaha sawirkaDERRICK HAMILTON
Image captionDerrick Hamilton
Derrick Hamilton, oo u dhashay dalka Mareykanka, wuxuu muddo 21 sano ah xabsi ugu jiray dambi uusan galin, isagoo intaasoo dhan isku dayayay inuu dowladda ka dhaadhiciyo in uusan wax dambi ah lahayn.
Hase yeeshee, ugu dambeyn wuxuu khabiir ku noqday cilmiga sharciga, kaasoo uu ku bartay xabsiga dhexdiisa.
Xirfaddiisa dhinaca sharciga ayaa u suurtagalisay inuu ku nadiifiyo magaciisa, sidoo kalena uu ku caawiyo dadka loo xiro dambiyada aysan geysanin.
Derrick waxaa la xiray sanadkii 1991-kii, xilligaas oo ay da’diisu ahayd 25 sano. Waxaa loo maxkamadeeyay eedeyn ku saabsan inuu toogasho ku dilay nin la sheegay inuu lacag ka dhacayay.
Markaas ka hor wuxuu u diiwaan gashanaa booliska oo ku tuhunsanaa inuu geystay dambiyo isu jiray dilal iyo heysasho hub sharci darro ah.
Wareysi uu BBC-da siiyay ayuu Derrick uga sheekeeyay qisadiisa cajiibka ah.
“Markii aan muddo 6 sano ah xabsiga ku jiray, oo aan xaqiiqsaday in aanan isbariyeeli karin, ayaan go’aan ku qaatay inaan barto cilniga sharciga,” ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in ujeeddada ugu weyn ee uu xirfaddaas u baranayay ay ahayd sidii uu ugu shaqeysan lahaa marka uu xabsiga kasoo baxo – inkastoo xukunkiisu uu ahaa cimrigaa haku furto.
“Buugaagta sharciga ee yaallay maktabadda ayaan akhrintooda billaabay, anigoo is dhahaya bannaanka ha u bixin adigoo aan waxba faraha ku heynin. Dhanka kalena waxaan baran jiray xirfado dhinaca farsamada gawaarida ah.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: “Aad baan ugu faraxsanaa barashada xirfadahaas kala duwan, waayo waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo tamar iyo awood badan ay ku jirto, meel uu ku bixiyana u baahan.”
Hamilton, oo hadda 54 jir ah, waxaa xukun xabsi daa’in ah loogu riday dilka nin lagu magacaabi jiray Nathaniel Cash, kaasoo lagu toogtay xaafadda Brooklyn ee magaalada New York.
Image captionDerrick Hamilton waxaa lasii daayay 2015-kii
Qareennadiisa waxay ku doodayeen inuusan falkaas geysanin. Hamilton wuxuu sheegay inuu dambigaas dusha ka saaray askari ka tirsanaa booliska oo lagu magacaabo Louis Scarcella, kaasoo kiisaskiisa dilalka la xiriira ay il gaar ah ku hayeen saraakiisha xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Brooklyn.
‘Waxaan ku sigtay inaan isdilo’
Intii uu xabsiga ku jiray wuxuu dareemayay niyad jab weyn, sida uu BBC-da u sheegay.
“Waxaan cabashadeyda u gudbiyay cid walba. Xitaan waxaan farriin u diray barasaabka gobolka, laakiin cid i dhageysatay ma jirin”.
Markii uu wax jawaab ah ka waayay telefoonnadii uu wacayay iyo warqadihii uu dirayay, wuxuu hoosta ka xarriiqay in shaqada ay tahay mid kaligiis u taalla.
“Waxaan ogaaday inaan heysto waqti badan oo aan lafteyda dib u eegis ugu sameyn karo kiiskeyga, haddii aan sharciga barto. Waxaan ku sigtay inaan isdilo haddii aanan heli lahayn buugaagta sharciga”, ayuu yiri Derrick.
21 sano kaddib, Hamilton wuxuu ku guuleystay kiiskii ay maxkamadda Brooklyn dib u furtay ee ku saabsanaa in dacwaddiisa dib u eegis lagu sameeyo.
Maalintii ugu dambeysay wuxuu isagoo xor ah albaabka maxkamadda ka baxay xilli ay garabka u saarneyd gabadhiisa oo 2 jir ah.
Previous articleQodobada ugu Muhiimsa ee leyla qaatay Wada hadalada Soomaliya iyo Soomaliland
Next articleMagaalada Muqdisho oo si weyn loo dhageysta Heysta Waayaha Cusub ee NaC Nac
Wafdigii Dowlada Federaalka u matalilahaa wada Hadalada Soomaaliya iyo Soomaliland...
Xubna ka tirsan Alshabaab oo Xukun adag lagu Riday